Ipolitikiicker Iindaba zeJJ Digest: Agasti 15th - Ijezi-Entsha Yezopolitiko
Eyona Ijezi-Entsha Yezopolitiko Ipolitikiicker Iindaba zeJJ Digest: Agasti 15th
Ipolitikiicker Iindaba zeJJ Digest: Agasti 15th
Indibano yeNdibano uJohn Wisniewski’s Ukuxhaswa kukaMongameli uBernie Sanders kunokunceda okanye kulimaze amathuba akhe ukuba angagqiba ekubeni abalekele irhuluneli yaseNew Jersey. Ngeli xesha, kwiBurlington County, abagqatswa bakasherifu ziindawo zokurhweba, ngelixa Iidemokhrasi zeSithili saseSomerset Banethemba lokuba umgqatswa wabo wesherifu ubazisela utshintsho lwethamsanqa. Kuyo yonke le nto nangakumbi ngeendaba zopolitiko zikarhulumente, funda.
Ngaba iSiseko sikaBernie siza kubuya kwiWisniewski Gubernatorial Run e-NJ?
Ummeli wendibano uJohn Wisniewski ungomnye wabantu abaninzi beDemokhrasi abacinga ngokungenela ugqatso lwegubernatorial yaseNew Jersey. Kodwa ukuba inye into ebeka u-Wisniewski ngaphandle kwabo bakhuphisana nabo kukuba wayekuphela kwegosa elonyuliweyo kwilizwe laseNew Jersey ukubuyisela esidlangalaleni ukuqhuba kuka-Mongameli waseVermont uSenator uBernie Sanders. UWisniewski usebenze njengomlawuli welizwe kwiphulo leSanders ngeDemocratic National Convention (DNC) kwinyanga ephelileyo.
UAlyana Alfaro, wezopolitikoNJ Funda ngokugqithisileyo
Iphulo lokurhweba ngePension Pots-Shots e-Burlington Sheriff's Race
Ukuqokelela ingeniso yomhlala-phantsi emsebenzini yindawo eqhelekileyo ekuliliswa ngayo phakathi kwamagosa aseburhulumenteni eNew Jersey, kwaye isenzo eso sibangela isiphithiphithi kwinqaba enye yeRiphabhlikhi yaseSouth Jersey.
U-JT Aregood, wezopolitiko Funda ngokugqithisileyo
I-Somerset Dems iXhomeke kwiiThemba zabo ze-Countywide ku-Franklin Sheriff Sinethemba
Ngaphezulu kweminyaka engama-25 idlulile okoko iSomerset County Democrats yagqibela ukufumana isihlalo kurhulumente wommandla. Kodwa abaDemokhrasi kuloo mmandla banethemba lokufumana iingubo ngexesha lonyulo lobongameli kulo nyaka, xa uHillary Clinton esiya kulwa noDonald Trump. Phantsi ukuvota, umbutho weDemokhrasi ubeka ithemba lawo kuDarrin Russo, igqala elineminyaka engama-30 lamapolisa elokishini laseFranklin abalekela unothimba.
I-arhente yokubukela kunyulo i-NJ igcinwe ecaleni
Iarhente yabalindi elawula amaphulo ezopolitiko kunye nabaphembeleli baseNew Jersey baphulukene nokulunywa kulo nyaka, njengoko izithuba kwibhodi yookhomishinari ziye zayigcina ekubambeni iintlanganiso nasekugwebeni aboni.
USalvador Rizzo, iRekhodi Funda ngokugqithisileyo
Xanadu Mbini? Iivenkile ezinkulu ziyafa kulo lonke elaseMelika kodwa iirhafu zerhafu ziya kwiAmerican Dream
Iziganeko ezibini zenzeke kwiveki ephelileyo ezibonakalise ukungabinangqondo kwamaxesha amagosa aseNew Jersey xa kufikwa kuphuhliso lwezoqoqosho.
UPaul Mulshine, uLedger weNkwenkwezi Funda ngokugqithisileyo
Oko bafuna ukukugcina ngaphandle kwetyala laseBridgegate
Xa etyholwa ngezityholo wenza iyelenqe lokudala iingxaki zendlela eGeorge Washington Bridge ukohlwaya usodolophu, uBridget Kelly akafuni ukuba abagwebi beve ukuba wayebhale umyalezo malunga nokubangela iingxaki zendlela kurabi waseNew Jersey.
UMaddie Hanna, uMceli-mibuzo Funda ngokugqithisileyo
UN angaba sengxakini enkulu ukuba kungakho olunye uqoqosho
Isifundo esitsha saphosa amathandabuzo malunga nokuba iNew Jersey inokumelana nolunye uqoqosho.
USamantha Marcus, NJ.com Funda ngokugqithisileyo
Uluvo: Njengoko iindlela ziyaqhekeka, uChristie uphatha umsebenzi wakhe njengokuphazamiseka kwezemidlalo
Ngethuba lokhenketho lwe-quixotic lwe-windbaggery eyaziwa ngokuba ngumkhankaso wakhe wobongameli, uChris Christie uxelele igumbi labathandi bobuxoki ukuba umsebenzi werhuluneli kukufumana abantu egumbini kunye nokubamba iintloko ezaneleyo kunye kunye nokugcoba iingalo ezaneleyo kunye ne-cajole ngokwaneleyo ukuba zibekwe Umdla omkhulu kurhulumente ngaphambi komdla wabo. Yiloo nto esiyenzileyo eNew Jersey, kwaye yiyo imodeli yaseMelika.
IBhodi yokuhlela ye-Star-Ledger Funda ngokugqithisileyo
Ngaba ibango uChristie 'uthe tye uxokile' malunga neBridgegate ulimaza amathuba akhe ekhabhinethi kaTrump?
Ngaba ukubhengezwa kweBridgegate yakutshanje kuyakwenzakalisa amathuba kaRhulumente uChris Christie kwindawo yekhabinethi ukuba uDonald Trump uphumelele i-White House?
UClaude Brodesser-Akner, NJ.com Funda ngokugqithisileyo
Inkxaso mali yesikolo: Ngaba isicwangciso sikaChristie siza kuyenzakalisa i-NJ?
Ugqirha uChris Christie ebethandaza isindululo sakhe esitsha esinempikiswano njengesibonelelo-mali njengeFomula yokuLungisa, indlela yokunyanga wonke umfundi waseNew Jersey kwisikolo sikarhulumente ngokufanayo. Yintoni ecace gca kubenzi bomgaqo-nkqubo wezemfundo: Icebo lakhe laliya kumisela iGarden State ngaphandle kwesizwe. Abanye baphikisa ukuba ibeka iNew Jersey umva.
UAmanda Oglesby, Asbury Park Press Funda ngokugqithisileyo
Abantu abayi-9 uChris Christie angayi kuqesha kuTrump
Ugqirha uChris Christie ungusihlalo weqela elonyuliweyo likamongameli weRiphabhlikhi uDonald Trump, ukuba uTrump angaluphumelela unyulo lukaNovemba, okuthetha ukuba uzokongamela umsebenzi omkhulu wabasebenzi ukuba enze i-4,000 ye-Trump yomnyulwa kwezopolitiko.
UBob Jordan, iAsbury Park Press Funda ngokugqithisileyo
Into efunyanwa nguMntu wonke ngokungalunganga malunga neStoicism Isona sizathu sokuba uyifuna
'Luke Cage' 1 × 08/09/10 Ukuphindaphinda: Idayimane kwiRough
I-Damien Hirst's Fake Shipwreck Treasure iya kuboniswa ecaleni kweMisebenzi nguBernini
Ukutya i-'Sheeee-it ': U-Isiah Whitlock kwi' The Wire 'Curse; Umkhabi wokukhaba uBobblehead
ngaphezulu kweendlela ezizezinye zokufaka kwi-adderall
ukwehla kobunzima beepilisi ezi-4
yeyiphi ipesenti yemisebenzi efuna isidanga sasekholejini
liqala nini ixesha ukungabi nazintloni
Ixesha elitsha le-flash kwi-netflix
simahla ukuthandana iwebhusayithi websites usa